Trano condo Surfside 12 Story ao amin'ny Collins Ave any Florida no nirodana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Trano condo Surfside 12 Story ao amin'ny Collins Ave any Florida no nirodana
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Trano vaky ao Surfside, Florida
Taorian'ny sasakalina dia nirodana ny tranobe misy rihana 12 ao amin'ny tanàna fialantsasatra any Surfside. Tsy fantatra ny antony. Tsy mazava ny isan'ny ratra azo antenaina.
Trano iray tao amin'ny 8777 Collins Ave, Surfside, Miami, Florida, no nirodana tamin'ny alakamisy maraina
Fiara vonjy taitra maherin'ny 80 no eo an-toerana
Nilaza ny nanatri-maso fa ny tranobe dia ny Solara Surfside Resort, fa ny polisy kosa nanamafy ny adiresy ho an'ny Champlain Tower South, trano ondo fonenana.
Nisy vavolombelona nanatri-maso ny zava-niseho tamin'ny tranobe misy rihana marobe iray tany Surfside nilaza fa ilay trano nirodana tamin'ny lalana 88th sy Collins any Miami no misy ilay toerana Solara Surfside Resort, a Vacations Bluegreen. T
Toa diso io fampahalalana io. Araka ny scanner an'ny Departemantan'ny polisy ao Miami, ny toerana misy azy dia 8777 Collins Ave any Surfside, toerana aiza no misy an'i Champlain Towers South, trano fanofana Condo misy rihana 12.
Nilaza ny mponina ao an-toerana fa eo amin'ny “Rowan'i Milyionaire” ity tranobe ity - eny amoron-dranomasina ihany koa.
Tantara mipoitra ity. Tsy fantatra mazava hoe firy raha nisy naratra na maty tamin'ity tranga mitohy ity. Koa satria tamin'ny misasakalina no nitrangan'izany dia mety mila fotoana ny fanombanana mazava tsara an'ity toe-javatra ity.
Vehivavy iray tao amin'ny Facebook no nilaza fa teo am-pananganana trano mifanila aminy izy. Nesorina izy ary any amin'ny ivom-pialam-boly akaiky any Surfside, FL
FOTSINY IHANY: nirodana tany amin'ny morontsiraka Florida akaikin'ny Miami Beach ny tranobe
- Insider Paper (@TheInsiderPaper) Jona 24, 2021